တံတား (The Bridge) | Local Resources Centre
တံတား (The Bridge)
Khaing Pwint Aung Friday, March 22nd, 2019
အစိုးရနှင့် ပြည်သူဟူသည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် တစ်သားတည်းရှိရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရှိ လူငယ်များနှင့် ဒေသခံအစိုးရများကြားတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။ ဒေသခံအစိုးရမှလည်း လူငယ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများကို အားတက်သရော မရှိသည့်အပြင် လူငယ်များဘက်မှလည်း နိုင်ငံရေးသည် မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း မသိခြင်း စသည်ဖြင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ရှိနေသောကြောင့် ကျောက်ဆည်မြို့တွင် လူငယ်များအချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း ၊ လူငယ်နှင့် လူကြီး ကြားလည်းကောင်း ၊ လူငယ်နှင့် အစိုးရကြားသော်လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မရှိသလောက် နည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောက်ဆည်လူငယ်ကွန်ယက် သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့နှင့် လက်တွဲ၍ Civic Engagement For Youth Project ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
စီမံချက် ကနဦးအချိန်တွင် အစိုးရ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိလာရန် ရုန်းကန်ခဲ့ရခြင်း ၊ တစ်ဖက်တွင်လည်း လူငယ်များအား စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိစေရန် စည်းရုံးခဲ့ရခြင်း အစရှိသော စိန်ခေါ်ချက်များ ရှိခဲ့သော်လည်း အစိုးရဘက်နှင့် နားလည်မှုရရှိလာရန် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့ မကြာခဏသွားရောက်၍ ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း ၊ လူငယ်များစိတ်ပါဝင်စားလာစေရန်အလို့ငှာ ၎င်းတို့ စိတ်ပါဝင်စားလောက်သော အကြောင်းအရာများကို သင်တန်းနှင့် မိတ်သဟာရအစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် အစိုးရ၏ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများ ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်း ၊ လူငယ်များ၏ နိုင်ငံရေးခံယူချက်များ ပြောင်းလဲလာခြင်း ၊ လူငယ်များနှင့် အစိုးရငှာနများအကြား ပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း စသော အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း ကျောက်ဆည်လူငယ်ကွန်ယက်အသင်းမှ စီမံကိန်း မန်နေဂျာ ကိုချစ်သူအောင်မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ကျောက်ဆည်လူငယ်စင်တာသည် လူငယ်များအတွက် အလုပ်လုပ်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းကို လူငယ်များသာမက ၊ အစိုးရများ ၊ မြို့နေပြည်သူများမှလည်း လက်ခံလာသည်ဟု ၎င်းမှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ အစီအရင်ခံစာများနှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံများလည်း ရရှိခဲ့ပြီး လူငယ်များမှလည်း ၎င်းတို့၏ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကို ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိများ ရရှိခဲ့သည်။
“ကျောက်ဆည်လူငယ်စင်တာကနေပြီးတော့ လူငယ်တွေအတွက် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့က ခုလို တစ်ဖက်တစ်လှမ်းက ကူညီပေးတော့ လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်လာမယ့် လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ခုလိုဘဲ အတူတူ ဆက်ပြီး လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့နဲ့ ခုလို မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာပါတယ်” ဟုကိုချစ်သူအောင်မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Government and the public shall haveatrusting relationship for betterment of communities. However, the situation in Kyauk Se is defying the statement because the local government is neither urging nor supporting the collaborate activities with youth or the public and on the other hand, young people also have the misconception that politics have nothing to do with them. In order to change the mindset of youth to be more civic conscious, Kyauk Se Youth Network is implementing Civic Engagement for Youth Project with the support of the Local Resource Centre. During the initial stage of the project implementation, many challenges were faced such as struggling to get government’s participation and persuading young people to have interest on the issues. In order to overcome some of the problems, the team Kyauk Se Youth Network started to engage the General Administration Department for advocacy and support and managed to include some topics interesting for young people and the government. It is known that not only from government side, but also the public accept Kyauk Se Youth Network as an organization who is working for people said by Ko Chit Thu Aung, the project manager of Kyauk Se Youth Network. “With the support of LRC, Kyauk Se Youth Network could perform many valuable tasks to benefit the community. It is an honor and they look forward to more opportunity in future.” said Ko Chit Thu Aung. I am honored to be LRC’s partner organization he added.